igwe anaghị agba nchara sippy cup
Aha aha: igwe anaghị agba nchara sippy cup
Ihe: 304 igwe anaghị agba nchara
Ikike: 500 ml
Nha: 94mm na dayameta na 180mm n'ịdị elu
Agba: ọcha, pink, acha anụnụ anụnụ grajentị, wdg
MiOQ: 2 PC
Ahịa: USD2.8-USD3.5 / PC
Atụmatụ: 304 igwe anaghị agba nchara mma ihe, polygon igwe anaghị agba nchara cup ahu
Ọrụ mara oke mma, ederede dị nro, dị mfe ijide
Sealing roba, ike na okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ, mbughari, ọzọ ịdị ọcha.
304 na-eguzogide ahụ ike, dị mfe ihicha.
A na-eme kọfị kọfị site na nsị ion na-adịghị mma, tourmaline, ụrọ dị elu na ihe ndị ọzọ dị mkpa. Nnukwu ion nke ion na-adịghị mma nke nnukwu kọfị kọfị wepụtara nwere ike ịmegharị mmiri, mepụta ion hydroxide na-adịghị mma, mee ka otu macromolecular dị na mmiri pere mpe, ma mee ka mmiri na-eme ka mmiri ghara ịbanye na mmiri. Ya mere, mmiri ọ drinkingụ drinkingụ na iko kọfị nwere ike siri ike igbari ihe ọ beụ beụ ahụ, ihe ọ beụ theụ ihe ọ theụ beụ ahụ ka mma. Wunye mmiri n'ime kọfị kọfị iji mee ka ọrụ mmiri dịkwuo elu, dozie ahụ mmadụ, mezie ime ahụ na yang, na-akwalite metabolism, melite microcirculation mmadụ, ma nwee ezigbo ahụike na nlekọta ahụike na mbelata ọrịa dị iche iche.
E nwere ọtụtụ ụdị kọfị iko ihe, dị ka ite, igwe anaghị agba nchara, ọkpụkpụ china na na. Poselin na ọkpụite na-enwu gbaa. Ọkpụkpụ ite ahụ adịchaghị mma ma ọ dị ntakịrị. Ọ bụrụ na ncha ahụ daa, akụkụ ahụ ga-emerụ nfe ma enweghị ike ịsacha ya; poselin nwere ụdị ya dị mma ma anaghị amịkọrọ mmiri, ma n'ezie ọnụahịa ga-adị elu karịa; Ọkpụkpụ china cup nwere nchebe okpomọkụ dị mma, nke nwere ike ime ka ọnọdụ kọfị dị na iko ahụ, mana ọnụahịa ahụ dị oke elu; okpukpu abụọ nke igwe anaghị agba nchara nwere nnukwu mkpuchi mkpuchi, na-adịgide adịgide ma agaghị eyi ya, ọnụahịa dị mma karịa kọfị kọfị china, mana enweghị mma Mmekọahụ
Ihe dị mfe nke iko ite na okirikiri iko poselin na-egosi ụdị kọfị dị iche iche.
Iko ite: Ọ nwere ederede siri ike ma dabara adaba maka kọfị a deepara n'ọkụ nwere uto siri ike.
Poselin iko: kasị nkịtị, ọ nwere ike ịkọwa ezigbo okpukpo kọfị. N’etiti ha, kọfị kọfị kọfị ọkpụkpụ nke ụrọ china dị elu ma jikọta ya na nri anụ anụmanụ nwere anụ ọkụ, agba dị nro, njupụta dị elu na nchekwa ọkụ dị mma, nke nwere ike ime ka kọfị dị na iko ahụ belata nwayọ nwayọ nwayọ, na bụ ihe kachasị nwee ike igosipụta kọfị kọfị Nnukwu nhọrọ.
Nke gara aga: omenala 304 okpukpu abụọ nke igwe anaghị agba nchara ahịhịa iko okpukpu abụọ-oyi akwa mmiri ara ehi tii thermos iko obere kọfị cup onyinye mmiri iko
Osote: Ugboro abụọ Wall agụụ gwara mmanụ igwe anaghị agba nchara ihiputa Gosiri Sports Water Bottle Wide Ọnụ na BPA mkpuchi
Seramiiki Kọfị Tumbler
Kọfị Cup Tumbler
Kọfị Mug Tumbler
Kọfị Tumbler Cup
Kọfị Tumbler igwe anaghị agba nchara
Igwe anaghị agba nchara ifuru cup with handle
Yi Ceramic Mugs
abụọ mgbidi igwe anaghị agba nchara na-a drinkingụ iko kọfị ...
Corrugated seramiiki kọfị iko, kọfị Foto muglọ Nga
igwe anaghị agba nchara gwara mmanụ cup
Igwe anaghị agba nchara ifuru cup with scale